Akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ, ndị na -ebunye ya - China Automotive Upholstery leather manufacturers
TPE Car Flo Mat
Akpụkpọ anụ Car Ụkwụ ute
Easy nwụnye Universal Auto Akpụkpọ anụ Seat Protec ...
Na -adịgide adịgide ma na -echebe TPE Car Mats Mats na Black ...
Ụkpụrụ dị iche iche nke ihe mkpuchi ala ala ihe
Automotive Microfiber Sịntetik Akpụkpọ anụ Na Ahụekere Bu ...
Emeputa nke China Suede mmetụta mgbaze-Free Mic ...
High Micro Auto Microfiber Akpụkpọ anụ na Competitiv ...
Eco-enyi na enyi Automotive Microfiber Akpụkpọ anụ maka Car M ...
Ike Peel nke na -eku ume Car Microfiber Pu Akpụkpọ anụ
Aha zuru oke nke akpụkpọ anụ microfiber bụ "akpụkpọ anụ microfiber na -eme ka ọ dị ike". Ọ bụ nke akpụkpọ anụ mịpụtara ọhụrụ mepụtara na akpụkpọ anụ sịntetik. Ọ bụ nke ụdị akpụkpọ anụ ọhụrụ.
Otutu Agba na Ezi Microfiber Akpụkpọ anụ na -eguzogide
Aha zuru oke nke akpụkpọ anụ microfiber bụ "akpụkpọ anụ microfiber na -eme ka ọ dị ike". Ọ bụ nke akpụkpọ anụ mịpụtara ọhụrụ mepụtara na akpụkpọ anụ sịntetik. Ọ bụ nke ụdị akpụkpọ anụ ọhụrụ. Ọ nwere nguzogide abrasion, nguzogide oyi, iku ume, nguzogide ịka nká, na udidi dị nro. , Nchedo gburugburu ebe obibi na ọdịdị mara mma, ọ bụ nhọrọ kacha mma iji dochie akpụkpọ anụ (mkpuchi mkpuchi mbụ), ugbu a ọtụtụ azụmaahịa ga -ere akpụkpọ anụ microfiber dị ka mkpuchi mkpuchi mbụ na ọnụ ahịa dị elu.
0.6mm - 1.4mm Akpụkpọ anụ sịntetik Microfiber maka Akpụkpọ anụ ụlọ
1.2mm akpụkpọ anụ microfiber maka ụgbọ ala, nwere aka na -adị nro na ezigbo ala. Ibu dị ncha, 30% dị mfe karịa akpụkpọ anụ, na -egbo mkpa ịdị arọ dị mfe chọrọ yana akụ na ụba mmanụ ọkụ.
China Automotive Seat Cover Material Microfiber Akpụkpọ anụ Akụrụngwa
Aha zuru oke nke akpụkpọ anụ microfiber bụ "akpụkpọ anụ microfiber na -eme ka ọ dị ike". Ọ nwere nchekasị iyi mgbochi, ume iku ume, mgbochi ịka nká, ịdị nro na nkasi obi, na mgbanwe siri ike.
0.7-1.4mm Akpụkpọ anụ Microfiber maka ihe eji eme ụlọ
Mmetụta dị mma, dị ka akpụkpọ anụ eke, mee ka oche gị na ime gị nwee ntụsara ahụ.
Ihe mkpuchi ụgbọ ala Microfiber Akpụkpọ anụ Ejiji Akpụkpọ anụ ịchọ mma
Ọ bụ akpụkpọ anụ aka ya nwere ọdịnaya teknụzụ kachasị elu ugbu a. Akpụkpọ anụ microfiber dị elu na-agwakọta uru nke ọtụtụ akpụkpọ anụ. Ọ dị ike ma na -adigide karịa akpụkpọ anụ, ọ dị mfe ịhazi ya, yana ọnụego ojiji dị elu.
Na -ere ọkụ Vegan Microfiber Akpụkpọ anụ oroma akpụkpọ anụ maka oche ụgbọ ala
N'ime polyurethane PU agbakwunyere microfiber, yabụ akpụkpọ anụ a nwere ezigbo mgbochi na -eyi, n'ogo ụfọdụ iji gbatịkwuo oge akpụkpọ anụ, yana iku ume na mgbanwe dị mma karịa, metụ karịa akpụkpọ anụ.
Blue Microfiber Akpụkpọ anụ na -anọte aka Oche akpụkpọ anụ oche oche
Aha zuru oke nke akpụkpọ anụ microfiber bụ "akpụkpọ anụ microfiber na -eme ka ọ dị ike". Ọ bụ nke akpụkpọ anụ mịpụtara ọhụrụ mepụtara na akpụkpọ anụ sịntetik. Ọ bụ nke ụdị akpụkpọ anụ ọhụrụ. Ọ nwere nguzogide abrasion, nguzogide oyi, iku ume, nguzogide ịka nká, na udidi dị nro. Nchedo gburugburu ebe obibi na ọdịdị mara mma, ọ bụ nhọrọ kachasị mma iji dochie akpụkpọ anụ (mkpuchi mkpuchi mbụ).
Omenala Microfiber Akpụkpọ anụ Ihe Akpụkpọ anụ Akpụkpọ anụ
Akpụkpọ anụ Microfiber bụ ụdị akpụkpọ anụ emegharịrị, nchekwa gburugburu ebe obibi, enweghị mmetọ ọ bụla, nwere ike bụrụ ezigbo dochie anya akpụkpọ anụ.
100% PU Microfiber Akpụkpọ anụ ime ụgbọ ala
Ọ nwere nguzogide abrasion, nguzogide oyi, iku ume, nguzogide ịka nká, na udidi dị nro. Nchedo gburugburu ebe obibi na ọdịdị mara mma, ọ bụ nhọrọ kachasị mma iji dochie akpụkpọ anụ (mkpuchi mkpuchi mbụ), ugbu a ọtụtụ azụmaahịa ga -ere akpụkpọ anụ microfiber dị ka mkpuchi mkpuchi mkpuchi mbụ na ọnụ ahịa dị elu.
1mm Faux PVC Akpụkpọ anụ wuru naanị ma ọ bụ akụkụ abụọ
Tụnyere akpụkpọ anụ ndị ọzọ, akpụkpọ anụ PVC na -adị mfe plastik ma ka mma ịsacha, na -ejikarị akwa nhicha mmiri ma ọ bụ akwa nhicha mmiri. Ọtụtụ akpụkpọ anụ PVC nke Bensen mere dị, biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ nkọwa ma ọ bụ nlele.
0.45mm-1.5mm PU Akpụkpọ anụ Akpụkpọ anụ Pu maka mkpuchi oche oche
N'iji ya tụnyere akpụkpọ anụ PVC, akpụkpọ anụ PU nwere mmetụta aka ka mma yana iguzogide. Akpụkpọ anụ PU nke Bensen mepụtara dị mma na gburugburu ebe obibi, ọ bụrụ na ịchọrọ akpụkpọ anụ PU, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.